Badbaado – Akhbaarta Wanaagsan
Badbaadada waxay ku timaadaa rumeysadka Ciise Masiix. By Shino Gabo & Shania Abdullahi Gabo “Laakiin maxay leedahay? Eraygii waa kuu dhow yahay, waana ku jiraa afkaaga iyo qalbigaaga, waxaa weeyaan erayga rumaysadka oo …
Fariimaha kala duwan
Ciise iyo Nicodemus – Sidaan ku helikaraa nolosha weligeed ah?
YOOXANAA 3 1Waxaa jiray nin ka mid ahaa Farrisiinta oo la odhan jiray Nikodemos oo Yuhuudda taliye u ahaa. 2Isagu habeenkuu u yimid Ciise, wuxuuna ku yidhi, Macallimow, waannu og …
All resources / Lectures / Muuqaal
Jidka, Runta iyo Nolosha
Halkan dhegayso: Halkan daawo:
Maarkoos qaybta koowaad
Magac Ciise maxaa laga wadaa? Maarkos Cutubyada 1-8 Injiilka Ilaah Sida uu Maarkoos u qoray, waa buugga labaad ee afarta buug ee kitaabka quduuska ah ee ka hadlaaya nolosha Ciise …